Bit Calculator - Niova fo kely, byte, kilobit, kilobyte, megabit, megabyte, gigabit, gigabyte sy more ...
Ho fiovam-pony eo potika, bytes, kilobits, kilobytes, megabits, megabytes, gigabits, gigabytes, terabits, terabytes, petabits, petabytes, exabits, exabytes, zettabits, zettabytes, yottabits, yottabytes
Tyep bit - b Byte - B Kilobit - Kb Kilobyte - KB Megabit - Mb Megabyte - MB Gigabit - Gb Gigabyte - GB Terabit - Tb Terabyte - TB Petabit - Pb Petabyte - PB Exabit - Eb Exabyte - EB Zettabit - Zb Zettabyte - ZB Yottabit - Yb Yottabyte - YB
Passante (Kilo = 1000 bits)
>Fanamarihana:Ny vidin'ny K (Kilo) nandritra ny kajikajy toetra roa afaka 1024 na 1000, dia miankina amin'ny karazana kajy izay tianao atao. Diniho ny fampiasana K = 1024 rehefa mieritreritra fitahirizana fahaiza-na amin'ny kapila mafy, DVD, tselatra aelin'ny na fitaovana hafa sy ny haino aman-jery fitehirizana. K = 1000 tokony hampiasaina rehefa mieritreritra ny throughput, izany hoe ny hafainganam-pandeha amin'ny izay vaovao no nafindra.
Ohatra: Raha ny solosaina manana 1 KB ny kapila toerana dia milaza fa manana ny toerana B 1024, amin'izao fotoana izao ny throughput ny tambajotra karatra dia 1 KB/s dia izany no nilaza fa mampita angon-drakitra mba 1000 B/s.
Fampiasana: Ampidiro ny lanja sy ny rafitra ary kitiho hiova finoana, ny fanaovana kajy dia hanao ny fiovam-po ho vondrona rehetra.
"Dia manome calculators mifandray amin'ny solosaina izao tontolo izao."